Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Krismasy natokana ho an'ny tarehy | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | sary, maro
Como mamorona karatra karatra krismasy natokana ho azy miaraka amin'ny tarehinay hanome ny anao any amin'ireny fety ireny ary mahazo mifohaza ny fanahy krismasy ny namanao sy ny fianakavianao rehetra. ny fomba hafa sy mamorona mamorona carte postales namboarina haingana tsy mila manana fahalalana momba ny programa famolavolana sary.
Ataovy anaty sary mahatsikaiky ny tarehyo fahazoana karatra paositra tsy manam-paharoa, hafa ary mamorona ao a haingana sy mora. Ity Krismasy ity dia azonao atao ny mandefa ny namanao sy ny fianakavianao zava-baovao, hafa sy manaitra. Amin'ny Internet haingana sy tena intuitively, manaraka dingana kely vitsivitsy dia ho afaka hamorona izany ianaocarte postaly Krismasy mahafinaritra sy tany am-boalohany.
Ny dingana voalohany hahazoana ny karatra krismasy dia ny fidirana ao pejy web
Raha vantany vao eo amin'ny tranonkala isika, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia midina hatrany ambany avy amin'ny pejy izay ahitantsika katalaogy misy ny endriny fampiasa amin'ny karatra krismasy. Misafidy ny endrika izay tiana indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sary.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ampidiro ny sarinay mba hahafahana mamorona kaonty krismasy amin'ny endritsika manokana, amin'izay mahatratra vokatra mampihomehy. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny manome ny safidy handefasana sary.
Rehefa handeha hampakatra ilay sary isika dia hisokatra ny varavarankely vaovao manontany antsika raha te hampakatra ilay sary avy amin'ny PC-nay izahay na avy Internet, Misafidy iray amin'ireo safidy roa izahay ary manohy ny fizotrany.
Ny dingana manaraka dia misy amboary ny sarinay amin'ny endrika nofidintsika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ataontsika safidio ny ampahany amin'ilay sary tadiavinay jereo amin'ny volavolainay. Ao amin'ny faritra ankavia dia hitantsika ny sary tany am-boalohany sy ny faritra havanana ny famolavolana ny sary roa natambatra, dingana tsotra be izany satria tsy maintsy manitsy ny safidinay mahaliana anay amin'ny volavolanay ihany izahay.
Ny zavatra farany azontsika atao dia ampio lahatsoratra ny volavolanay mampiasa rafitra tena tsotra izay mamela antsika hanova ny endritsoratra, ny lokony ary ny soatoavina fototra hafa indrindra.
Ny tapany ambony dia mamela antsika ovay ny soatoavan'ny endritsoratra: endritsoratra, habe ... sns. Azontsika atao ihany koa ny misafidy lahatsoratra fohy amin'ny katalaogy.
Afaka isika izao mamorona carte postales haingana sy tsotra raha manome no tadiavinay zavatra mahafinaritra tsy mila mila mamolavola famolavolana tena matihanina. Raha te-hamorona paositra avo lenta avo lenta noforoninay tamin'ny alàlan'ny fikasihana kely ny programa famolavolana izahay, ny azontsika atao dia ny fampiasana Vatokely Noely ary mamorona karatra paosety mamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba hamoronana karatra paositry ny Krismasy amin'ny tarehy